Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Ndị Sweden nwere bụ Stena Line na-eme mkpebi siri ike
Na-agbasa News Travel • Ịtụ egwu • News • ndị mmadụ • Akụkọ na -agbasa ozi Sweden • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Enalọ ọrụ Sweden bụ nke Stena Line kwuputara n'oge na-adịbeghị anya na ọ na-ezube ịkatọ ndị ọrụ 600 ma mee ka ndị ọrụ 150 gafee UK na Ireland. Nke a bụ ihe ịrịba ama nke ihe ga-abịa ụbọchị dị n'ihu maka ụlọ ọrụ ụgbọ mmiri, ka ndị na-eduga data, na ụlọ ọrụ nyocha na-ekwu.
Ben Cordwell, Travel and Tourism Analyst na-ekwu, sị: “Ime enweghị ego bụ otu n’ime mkpebi ndị kasị sie ike otu ụlọ ọrụ ga-eme, ma ọ na-abụkarị ihe ndị kasị achụ nta ego n’oge azụmahịa n’ihi ihe isi ike ego. Site na ịmeghachi ego, ụlọ ọrụ nwere ike belata ọnụahịa ma kwado usoro ego.
Ọnọdụ akụ na ụba ugbu a nke COVID-19 wetara emeela ka ọ bụrụ ihe siri ike maka azụmahịa dị n'ime ụlọ ọrụ ụgbọ mmiri na-arụ ọrụ.
Cordwell na-agbakwụnye, sị: “Stena Lina abụghị ụlọ ọrụ mbụ na-ewere nzọụkwụ a, yana Virgin Voyages na-ekwenye na redundancies emeela n'etiti ndị otu akụkụ ya na US. Ọ ga-adịkarịrị ka azụmahịa ndị ọzọ mkpa ime ihe ndị a iji lanarị mmetụta nke COVID-19. ”
Stena Line bụ otu n'ime ndị ọrụ ụgbọ mmiri kacha ibu n'ụwa. Ọ na-arụ ọrụ Denmark, Germany, Ireland, Latvia, Netherlands, Norway, Poland, Sweden na United Kingdom, Stena Line bụ isi nke Stena AB, ya onwe ya bụ akụkụ nke Stena Sphere